भ्याट तिर्न के को आपत्ति हो: मन्त्री भट्ट « Tattatokhabar
काठमाडौं । बारम्बार नीजि क्षेत्रलाई ज्वाईको संज्ञा दिने उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कोरोनाको चपेटामा परेको बेला व्यावसायीलाई हौसला प्रदान गर्न भने सकेका छैनन् । सरकारले व्यावसायीलाई समयमै कर तिर्न ताकेता गरिरह्यो यता व्यावसायीले समय थप गर्न माग गरे । तर बारम्बार ज्वाई भनेर संज्ञा दिने मन्त्री भट्टले यो समयमा भने व्यावसायीको पक्षमा बोलेनन् । उनले राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा कोरोनाको कहरबाट आम जनजीवनलाई कसरी सहज बनाउने ? आर्थिक गतिबिधीलाई कसरी चुस्तदुरुस्त राख्ने र अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने विषय नै यतिबेला सरकारको सबै भन्दा प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै कर तोकिएको समयमै तिर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
फेरी म्याद (डेट एक्सपायर) सकिएको धेरै वस्तुहरु यतिबेला गोदाममा छन् । ति वस्तुहरुलाई अब निकाल्नु पर्यो । व्यवसायीहरुले म्याद सकिएका वस्तुहरु अलग गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसायीकता पनि देखाउनुपर्छ । म्याद सकिएका समानहरुको सूचि तयार पारेर क्षतिको तथ्यांक निकाल्नुपर्छ । त्यसका आधारमा व्यवसायीलाई कति नोक्सानी भएको हो ? समग्रमा राष्ट्रलाई कति नोक्सानी भएको हो भन्ने एकिन हुन्छ ।